‘ब्युटिफूल’ नायिका उपासनाका २६ तस्बिर: मोहित पार्ने रूप - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
चलचित्र क्याप्टेन बाट नेपाली रजतपटमा आएकी नायिका उपासना सिंह ठकुरीले पहिलो चलचित्रबाट नै दर्शकको राम्रो साथ पाइन् । चलचित्र क्याप्टेनमा उनको जोडी अनमोल केसीसँग बाधिएको थियो ।
उनको अभिनयलाई पनि दर्शकले रुचाएका थिए । चलचित्रको बजारमा जम्न सहज छैन । यसमाथि, थोरै चलचित्रमा काम गरेर जम्ने अवसर सबैका लागि हुँदैन । नायिका उपासना सिंह ठकुरीलाई दोश्रो चलचित्रमा काम गर्दा नै दर्शक र चलचित्रकर्मीले खुबै खोजे ।
. उपासनाको तस्बिरमा फ्यानको कमेन्ट “तिमी त स्वर्गबाट झरेको अप्सरा जस्तै” हेरौँ तस्बिरहरू
. अभिनेत्री उपासनालाई चलचित्रमा अभिनय गर्न भ्याइ-नभ्याइ
. ‘डिसेम्बर फल्स’ मा आर्यनको जोडी बन्दै उपासना
चलचित्र ‘क्याप्टेन’बाट यो क्षेत्रमा उदाएकी नायिका ठकुरीले अभिनय गरेको चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ले बक्स अफिसमा कमालको व्यापार गर्न सफल भयो । करिब १० करोडको हाराहारीमा व्यापार गरेको चलचित्रबाट नायिकाको काम पनि समीक्षक र दर्शकले रुचाए । दोश्रो, चलचित्रबाट नै यति सफलता पाएकी यी नायिका भाग्यमानी नायिका हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
नायिका सिंहलाई ‘क्याप्टेन’मा काम गर्दा धेरैले विभिन्न खालको टिकाटिप्पणी गरेका थिए । कसैले उनलाई मोटी भने, कसैले नायिकाको लागि फिट नरहेको भनेर टिप्पणी गरे । नायिका ठकुरी भन्छिन्–‘हामीले चलचित्रको पर्दामा वास्तविक जीवनका मानिसको पात्र चित्रण गर्ने हो । यसैले, कसैलाई पनि उसको शारीरिक वनावट हेरेर मुल्यांकन गर्नु गलत हो ।’ उनले,यो बर्स पढाई सकेर मात्र नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने तयारी गरेकी छिन । तर, उनलाई चलचित्रमा अफर गर्ने निर्माताको संख्या पनि कम छैन । उनि सामाजिक संजालमा पनिक निकै सक्रिय हुन्छिन् ।
हेरौं उनका सुन्दर तस्बिर –
कसैले उनलाई पहिलो चलचित्रमा भन्दा राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने कसैले उनलाई अबको चलचित्र क्षेत्र हाँक्ने नायिका भनेर समेत भन्न भ्याएका छन् । केही समय अगाडि एक अनलाइनसँगकोको कुराकानीमा उपासनाले आफूलाई नम्बर १ नायिका बन्ने सोच नआएको बताएकी थिइन् । बरु, उनले भनेकी थिइन्–‘मलाई राम्रो अभिनय गरेर दर्शकको मन जित्नु छ ।’
प्रियंका कार्कीको नम्बर १ को पोजिसन नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले उछिनिन् । प्रियंकाले जति चाडो सफलता पाइन्, त्यती नै चाडो आफ्नो स्थान पनि गुमाइन् ।
साम्राज्ञीलाई पनि अहिले नम्बर १ को स्थान जोगाउन गाह्रो परिरहेको छ । यसैले, पनि नायिकाहरुको पोजिशनमा आएको फेरबदलले उपासनालाई अगाडि ल्याउन सक्छ । तर, यसका लागि उनले आगामी चलचित्र रोज्दा धेरै पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । भलै, उनले पहिलो चलचित्रमा आफूलाई नोटिस गराइन् भने दोश्रो चलचित्रमा दर्शक र समिक्षकको तारिफ कमाइन् ।
तर, दुबै चलचित्रले चर्चा पाउनुमा उनी मात्र कारण थिइनन् । यसैले पनि उपासनाका लागि आगामी दिन सजिलो भने छैन । तर, उनले आफूलाई औलामा गन्न सकिने संभावित नायिकाहरुको सूचीमा भने उभ्याएकी छिन् ।
ससंद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधन
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रवार, असार ११ २०७८ २१:१२:०८
Tags :उपासना सिंह ठकुरी
‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ खोपको उट्घाटनमा पुगे देउवा र बेरी (फोटोफिचर)